HomeHoryaalladaRamadan iyo Koobka Aduunka :- Ciyaaryahanada Muslimiinta Ah Ee Ciyaaraya Iyagoo Sooman Ciyaaro Koob Aduun Tan iyo 1986-kii
Qaar kamid ah xidigaha ugu awooda badan tartanka koobka aduunka ee sanadkan ka dhacaya wadanka Brazil , ayaa ciyaari doona iyagoo sooman , maadaama ay bishii barakaysnayd ee ramadaan ay bilaabanayso bishan dhexdeeda.
Walalaha Ivory Coast:- Yaya (bidix) iyo Kolo Toure ayaa kamid ah xidigaha ciyaaraha iyagoo sooman
Waa markii koowaad tan iyo koob aduunkii 1986 ee la ciyaaro iyadoo lagu gudo jiro , cibaadada soonka ee bulshada Islaamku soonto Bisha Ramadaan ee sanadkasta.
Switzerland weeraryahankeeda-Xherdan Shaqir ayaa kamid ah ciyaaryahanada Soonka ku ciyaari doona
Ramadaan ayaa bilaabanaysa bishan June 28 keeda, oo ku began maalinta koobaad ama ciyaarta ugu horeysa ee wareega labaad ee tartanka ciyaaraha koobka aduunka, socona doonta ilaa bisha July 27 keeda oo maalmo badan kadib dhamaadka koobka aduunka ah.
Xidigaha xulka qaranka Faransiiska ee ay kamidka yihiin : Laacibka kooxda Real Madrid , Kareem Banzema, ciyaaryahanka kooxda Liverpool, Mamadou Sakho, difaacyahanka Arsenal Bacary Sagna iyo xidiga New Castle Moussa Sissoko ayaa dhamaantood ciyaaraha koobka aduunka ka qayb galli doona iyagoo sooman.
Weeraryahanka Real Madrid : Karim Benzema ayaa isna ku jira xidigaha Islaamka ah ee Soomaya Bisha Barakaysan ee Ramadaan
Halka, ciyaaryahanada walaalaha ah ee xulka qaranka, Ivory Coast ee Yaya iyo Kolo Toure – oo ay weheliyaan weeraryahankii hore ee Arsenal , Gervinho iyo laacibka khadka dhexe uga ciyaara naadiga Newcastle ee Cheick Tiote ay dhamaantood yihiin ciyaaryahano Muslim ah , isla markaana gudan doonaan waajibka Bisha Barakaysan ee Ramadaan , ciyaarahana ka qayb galli doonaan.
Edin Dzeko iyo badi ciyaaryahanada xulka Bosnia ayaa Iyagoo Sooman Koob Aduunka Ka qayb qaadanaya
Inta badan ciyaarhanada Xulka Bosnia ayaa ah Muslimiin , kuwaas oo dhamaantood bishan Soomi doona , waxaan ka xusi karnaa Edin Dzeko.
Sidoo Kale, Labada laacib ee xulka qaranka Belgium ee Marouane Fellaini iyo Moussa Dembele ayaa ciyaaraha ka qayb gallaya iyagoo cibaadaysanaya.
Mesut Ozil – halyeyga xulka qaranka Germany
Laacibka Furaha u ah xulka qaranka Switzerland ee Xherdan Shaqiri iyo halyeyga kooxda Arsenal iyo xulka Qaranka Germany ee Mesut Ozil ayaa ah xidigaha Muslimiinta ah ee iyagoo sooman ciyaaraha koobka aduunka ka qayb gallaya.
Klose Oo Ka Fadhiistay Ciyaaraha Caalamiga Ah
Messiga Cusub ee Dunida Oo Madrid U Gacan Gallay
22/01/2015 Abdiwahab Ahmed
Benzema & Ronaldo Oo Real U Horseeday 4 Dhibcood Oo Nadiif Ah Inay Ku Hayso Hogaanka La Liga